"Ukuba ulusu lwabo luba mnyama okanye lube mhlophe, bonke abantu bayalingana; omnye unokuphakama ngolwazi, ngobutyebi, ngobuhle, kodwa kungekhona ekubeni ngumntu." - Emilio Jacinto, Kartilya Ng Katipunan .
U-Emilio Jacinto wayengumfana onobuqili kwaye onesibindi, owaziwa njengomphefumlo kunye nengqondo ye-Katipunan, kunye no-Andres Bonifacio . Ngomphefumlo wakhe omfutshane, uJacinto wanceda ekukholeni ukuzimela kwePhilippines eSpeyin.
Wabeka imigangatho yolawulo olutsha olubhekiswe nguBonifacio; ekupheleni, nangona kunjalo, akukho mntu uza kusinda ukuze abone iSpanish ichithwe.
Akukho nto eyaziwayo ngokuphila kwasekuqaleni kukaEmilio Jacinto. Siyazi ukuba wazalwa eManila ngoDisemba 15, 1875, unyana womrhwebi ovelele. U-Emilio wathola imfundo efanelekileyo, kwaye wayezi kakuhle kwiTagalog neSpanish. Waya kwikolishi yaseSan Juan de Letran ngokufutshane. Ukugqiba ukufundela umthetho, wathunyelwa kwiYunivesithi yaseSanto Tomas, apho umongameli wasePhilippines, uManuelel Quezon , wayephakathi kwabafundi afunda nabo.
UJacinto wayeneminyaka engama-19 ubudala xa kufika iindaba zokuba iSpeyin ibambe iqhawe layo, uJoseph Rizal . Umncedisi, le nsizwa yashiya isikolo yaza yajoyina uAndres Bonifacio nabanye ukuba benze i-Katipunan, okanye "uMbutho oPhezulu kunabo bonke kunye noMbutho ohloniphekileyo woBantwana beLizwe." Xa amaSpeyin abulala iRizal kwiimali zetyala ngo-Disemba ka-1896, i-Katipunan yavuselela abalandeli bayo ukulwa.
U-Emilio Jacinto waba ngumkhulumeli we-Katipunan, kunye nokuphatha imali. U-Andres Bonifacio akazange afundiswe kakuhle, ngoko waxela umngane wakhe omncinci kwimicimbi enjalo. UJacinto wabhalela iphephandaba laseKappunan, iCalayaan . Kwakhona wabhala incwadi yesigxina ye-ntshukumo, ebizwa ngokuba nguKartilya ng Katipunan .
Nangona wayeseneminyaka engama-21 ubudala, uJacinto waba ngumbutho jikelele kumkhosi weqela lomkhosi, ethatha indima ekulweni neSpanish kufuphi neManila.
Ngelishwa, umhlobo kaJacinto kunye nomxhasi, uAndres Bonifacio, bebenokubhikisana nomsindo waseKappunan kwintsapho ecebileyo ebizwa ngokuba ngu- Emilio Aguinaldo . U-Aguinaldo, owayekhokela i-Magdalo iqela laseKappunan, wagxotha unyulo lokuba abe ngumongameli wolu rhu lumente. Emva koko uBhonifacio wabanjwa ngenxa yokunyanzela. UAguinaldo wayala ngoMeyi 10, 1897 ukubulawa kukaBonifacio kunye nomntakwabo. Umongameli owayezimela ngokwakhe waya ku-Emilio Jacinto, ezama ukumbamba kwi-yesebe yakhe yentlangano, kodwa uJacinto wala.
U-Emilio uJacinto waphila waza walwa neSpanish eMagdalena, eLaguna. Walimala kakhulu emfazweni kuMlambo waseMaimpis ngoFebruwari ka-1898, kodwa wafumana isiphephelo kwiSonto leParishina iParishena Parish, ngoku liphethe uphawu lokukhangela umcimbi.
Nangona esasinda kulolu londa, intsha yenguquko ayiyi kuhlala ixesha elide. Wafa ngo-Ephreli 16, 1898, we-malariya. Jikelele u-Emilio uJacinto wayeneminyaka engama-23 ubudala.
Ubomi bakhe babonakaliswe ngengozi kunye nokulahleka, kodwa iingcamango ezikhanyisiweyo zikaEmilio Jacinto zanceda ukuloba iPhilippines Revolution.
Amazwi akhe alinganisayo kunye nomnxeba womntu waba ngumlinganiselo wokulinganisela kwizinto ezingenangqiqo zabantu abaguquguqukileyo ezifana no-Emilio Aguinaldo, owayeya kuba ngumongameli wokuqala weRiphabhlikhi yasePhilippines.
Njengoko uJacinto ngokwakhe wayibeka eKartilya , " Ukufaneleka komntu akuyikuba yinkosi , kungekhona kwimiba yengcongolo okanye ubumhlophe buso bakhe, nokuba kungumbingeleli, ummeli kaThixo, okanye ukuphakama isimo esipheleleyo kulo mhlaba. Lo mntu uhlambulukile kwaye unyanisekileyo, nangona wazalwa ehlathini kwaye engazi ulwimi kodwa yena, onobomi obuhle, uyinyaniso kwizwi lakhe, unesidima kunye nodumo , ongazixinzezeli abanye okanye abancedi abacinezeli babo, owaziyo ukuziva nokukhathalela umhlaba wakubo. "
Izinambuzane Ezizivikela Ngokudlala Abafileyo
SUNY iNew Paltz GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Yintoni Ngokwenene Imephu?
Iziseko zeNitrogenous - Inkcazo kunye neZakhiwo